Soomaaliya Archive - Gool FM - page 5	twitter
Wax walba oo aad ugu baahan tahay kullamada maanta ee Heegan Vs Horseed, Elman VS Gaadiidka
(Muqdisho) 24 Feb 2017. Kooxaha sida weyn u xifaaltama ee Heegan iyo Horseed ayaa galabta ku ballansan garoonka Koonis, ciyaar ka tirsan horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya.
Kooxda Booliska ayaa wadata lix dhibcood, halka Horseed ay leedahay siddeed dhibcood, waxaana xusid mudan in wali horyaalka uu billaw yahay.
Naadiyada hoosyimaada ciidamada qalabka sida ee Horseed iyo Heegan ayaa doonaya in koox kaste ay guul gaarto si ay ugu sii dhaqaaqdo booska ay joogto.
Kooxda Cawa iyo Maalin waxaa kullankaan ka maqan kabtankooda Fu’aad 
Gacal oo qaliin jilibka ah ku maray dalka India…+SAWIRRO
(India) 23 Feb 2017. Xiddiga qadka dhexe ee naadiga Banaadir Gacal Faarax Cali ayaa qaliin seedka jilibka ah ku maray dalka India
Gacal oo muhiim u ah duulaanka dhexe ee kooxda xafidaneysa horyaalka Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay kulan ay kooxdiisu la yeelatay Heegan kal ciyaareedkii la soo dhaafay.
Waxaa la sheegay in markii hore loo qaaday dalka aan dariska nahay ee Kenya balse markii dambe loo gudbiyay dalka Hindiya halkaa uu ku maray qaliin lagu guuleystay.
(Mauqdisho) 21 Feb 2017.Horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya ayaa si xiiso leh ugu soconaya garoomada Koonis iyo Jaamacadaha oo ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Galabta waxaa la ciyaaray laba kullan, iyadoo ay guulo soo gaareen kooxaha ciidanka qalabka sida ee Heegan iyo Horseed.
Heegan ayaa kullan xiiso badan garoonka Koonis kula ciyaartay naadiga Waxool, iyadoo ugu badisay 2-0, xilli goolasha ay ka heshay Ekoro Matias iyo Jabriil Xasan Fariid.
Sidoo kale Horseed ayaa iyana 2-1 uga badisay naadiga Dekedda, waxaana goolasha u 
Wax walba oo aad ugu baahan tahay kullamada maanta ee Dekedda Vs Horseed, Heegan VS Waxool
(Mauqdisho) 21 Feb 2017..Garoonka Koonis degmada C/Casiis ee gobolka Banaadir ayaa galabta lagu ciyaari doonaa kullan aad u xiiso badan kaasoo ka tirsan horyaalka Soomaaliya
Kullankaan ayaa waxaa isaga hor imaan doona kooxaha Heeagan iyo Waxool , waxaana koox kaste ay dooneysaa in ay badiso
Kooxda Ciidanka Booliska ayaana badin kullamadii xilli ciyaareedkaa ay dheeshay horyaalka Soomaaliya,halka Waxool ay adkaatay kaliya hal kullan.
Jabriil Xasan Fariid oo ah kabtanka Heegan ayaa dib ugu soo laabanaya kooxdiisa mahadaama uu seegay saddex kullan oo adag.
Kullamada u harsan Banaadir oo ay ciyaareyso wareega koowaad ee horyaalka Soomaaliya
(Muqdisho) 03 Feb 2017.Kooxda Banaadir S.Club oo ah naadga difaacaneysa horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya ayaa isku diyaarineyso horyaalka kaaso dib loo amba qaadi doono 13-ka bishaan.
Kooxda uu hoggaamiyo macallinka reer Uganda ee Mbalangu Hussein ayaa kasoo badisay kooxaha Muqdisho United iyo Elman, iyadoo lix dhibcood ku hoggaamineysa horyaalka.
BSC ayaa kullanka soo aadan waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Heegan, waxaana u sii xigi doono kullamo kale oo aad u adag.
Sikastba Banaadir ayaana laga badin 24 kullan oo xiriir ah 
Akhriso kullamada u harsan Heegan oo ay ciyaareyso wareega koowaad ee horyaalka Soomaaliya
(Muqdisho) 03 Feb 2017.Kooxda ciidanka Booliska ee Heegan ayaa kullamo adag dib ugu furan doonta horyaalka heerka koowaad kaasoo dhawaan dib loo amba qaadi doono.
Sida ku xusan jadwalka kasoo baxay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, kooxda Heegan ayaa kullamada ay ciyaari doonto waxaa ay yihiin kuwo is xig xiga, waxaana u dhaxeysa kaliya min afar maalin
Kullanka ugu soo horeeya kooxda Gadaamoow uu hoggaamiyo waxa ay wajihi doontaa naadiga horyaalka difaacaneysa ee Banaadir S.Club.
Bille Muxudiin Buraale oo ku biiray kooxda Heegan
(Muqdisho) 02 Feb 2017. Kooxda Heegan ayaa la soo wareegtay mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan dhanka weerarka dalkeena Soomaaliya, kaasoo ah Bille Muxidiin Buraale.
Kabtankii hore kooxda Saxafi ayaa maalma ka hor kasoo tagay naadiga Dekedda, kaddib qillaaf soo kala dhex galay waxaana shalay duhurkii uu heshiis shaqsiyadeed uu la galay kooxda uu hoggaamiyo macallin Gadaamoow.
Heshiis labada dhinac ayaa noqday mid kusoo dhammaaday guul iyo is faham, waxaana dhimman heshiiska rasmiga ee xiriirka mahadaama iminka uu xiran yahay 
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo shaaciyay xilliga uu dib u furmi doono horyaalka heerka koowaad
(Muqdisho) 02 Feb 2017.Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa shaaciyay waqtiga uu dib u furmi doono horyaalka Soomaaliya kaasoo in muddo ah hakad uu ku jiray.
Sida ku cad jadwalka horyaalka ee kasoo baxay xiriirka, waxa uu furmi doonaa 13-ka bishaan oo ku began maalin Isniin ah, iyadoo la ciyaari doono laba kullan.
Inta uu ka dhamaanayo Wajiga koowaad ee horyaalka, waxaa maalintii la ciyaari doonaa laba kullan iyadoo lagu dheeli doono garoomada Banaadir iyo Jamaacadaha.
Maalmaha la ciyaari doono horyaalka heerka koowaad 
Banaadir oo kullan tijaabo ah ka badisay kooxda Horseed
(Muqdisho) 02 Feb 2017.Kooxaha Horseed iyo Banaadir ayaa kullan tijaabo ah waxa ay ku wada ciyaareen garoonka Koonis degmada C/Casiis ee gobolka Banaadir.
Labada Naadi ayaa qeyb ka ah kooxaha ugu awooda badan dalkeena Soomaaliya, waxaana kullankaan uu ahaa mid la isugu diyaarinayo horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya, kaasoo dhawaan dib u furmi doono.
Kullanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan waxaana waqtigii loogu tala galay uu kusoo dhammaaday 3-2 oo ay guusha ku qaadatay kooxda BSC.
Goolasha ayaa Banaadir waxaa u 
Heegan iyo Jeenyo oo bar baro ku kala tagay + SAWIRRO
(Muqdisho) 30 Jan 2017 – Kooxaha Jeenyo iyo Heegan ayaa kullan tijaabo ah waxa ay ku wada ciyaareen garoonka Koonis degmada C/Casiis ee gobolka Banaadir.
Kullanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan waxaana waqtigii loogu tala galay uu kusoo dhammaaday bar baro 1-1, xilli goolasha ay kala dhaliyeen Jabriil iyo 